Izenzo ezikufutshane neendawo eziMnyama eziMnyama zixelela i-Tale
Ziziphi ii-Quasars ezibonakalayo kwi-Early World?
Iifasta zizinto eziqaqambileyo ezikhoyo ngenxa yomsebenzi kwezinye zezinto eziyimfihlelo kunye nezinto ezimnyama ezijikelezeyo: izimbobo ezimnyama eziphezulu zeentlobo zeentaba. Igama elithi "quasar" livela kwixesha elithi "umthombo womsakazo we-quasi-stellar" ngenxa yokuba babonwa kuqala ngophumo oludityanisiweyo lomsakazo. Nangona kunjalo, banika amanye amaza okukhanya.
Iifasta zikhoyo kwiimbali ze-cosmic, kodwa izazi zeenkwenkwezi zinomdla kakhulu ekufundeni abo babemi xa iphela iphela yintsana, mhlawumbi malunga neminyaka eyi-bhiliyoni ubudala.
Yilapho i-cosmos ingena kwi-hood-hood yayo. Kuze kube ngo-2016, izazi zeenkwenkwezi zazi kuphela zimbalwa zezi bhakoni ezikude zokukhanya kwindawo yonke. Nangona ziqhakazile, umgama uphazamise ukukhanya kwawo, ngoko ukufumana iindawo ezikude kakhulu kufana nokukhangela i-flashlight ephazamisayo ekupheleni kwenkqubo yethu yelanga. Ngamanye amagama, njengokufuna inaliti kwindawo yokutya ede kakhulu. Izazi zeenkwenkwezi ziye zathola ezinye ii-quasars zangaphambili, eziza kubanika ingqiqo ngakumbi kwizinto ezihambayo kwindalo kwimihla yayo yokuqala yeebhiliyoni.
Ukufumana iiNasta eziKhulu, eziPhakathi zikhanyisa i-Early World
Kutheni sifanele sikhathalele ngendalo yonke? Ngaba uye wakha wakhangela imifanekiso yakho yomntwana? Okanye imifanekiso yabazali bakho kunye nookhokho bangaphambili? Ukuba ukhona, mhlawumbi uqaphele izinto ezinomdla malunga nokubonakala kwakho kunye nendlela efana ngayo nomkhulu-makhulu okanye umakhulukazi.
Ukujonga nje imifanekiso yakho yomntwana kukubonisa oko wakhe wabonakala ngathi kwaye ukuba le nto encinane yakhula ibe yintoni.
Khangela imifanekiso yedolophu yakho iminyaka eyi-100 edlulileyo, okanye ikhaya lakho iminyaka engama-35 edlulileyo, okanye ilungiselelo lamazwekazi ehlabathini ukusuka kwizigidi zeminyaka edlulileyo. Uyabona ukuba izinto ziguquka ngexesha.
Sekunjalo, ezinye izinto zihlala zifana ngokufanayo. Mhlawumbi isakhiwo esibalulekileyo edolobheni lakho sisekho emva kweminyaka engama-200. I-façade yayo ingahluka, kodwa imo ifanayo. Amazwekazi asenokuba ahlukane, kodwa amatye ahlala efana.
Indalo ayifani. Izinto zakuqala - iinkwenkwezi - umzekelo, jonga njengeenkwenkwezi esizibonayo namhlanje. Xa izazi zeenkwenkwezi zihlola ezo nkwenkwezi, ziyakwazi ukuba iinkwenkwezi zokuqala zazikhulu kunokuba ezinye zeenkwenkwezi ezinkulu namhlanje. Kodwa, ziyiinkwenkwezi.
Buyela ngokukhawuleza, kwaye indalo ibininzi "yesobho" yeengqungquthela ekugqibeleni zicolile ngokwaneleyo ukwenza amafu e-hydrogen ne-helium yegesi. Leyo yayiyiindawo zokuzalwa zeenkwenkwezi zokuqala kunye nemiqolo. Nangona kunjalo, bekungekho ukukhanya okukhulu kwindalo yokuqala, ngoko kunzima ukufunda. Ukuzalwa kweenkwenkwezi zokuqala kunye neenkwenkwezi ezinkulu zokuqala kwiminyaka engamakhulu ambalwa ezidalwa kwindalo yendalo yonke yavelisa kwizimbobo ezimnyama eziphezulu ezihleli ezintliziyweni. Kwaye, xa loo mingxobho emnyama "iqhubekile" kwaye yaba yi-quasars, yilula yonke intsha. Ngokubambisana nendima yemeko emnyama , ubuncinane bendalo ihlala yinye yezona ziqhamo ezingenakuphikiswa kwezulu.
Iifasta ziya kunceda ngaloo sifundo.
IiKasasta Zinceda njani?
Unokuzibuza ukuba ukukhanya okuvela kwi-quasar kunokusinceda njani ukuba "sibone" kwiinkwenkwezi zeenkwenkwezi kunye nemiqolo. Iifasta zisebenza ngokusemgangathweni. Iimbobo ezimnyama eziphakamileyo ezenza ukuba zenze iijets ezinkulu eziphathekayo ezihamba phambili kwiindawo. Ziqhakazile kwi-x-ray, i-radiyo, i-ultraviolet, kunye nokukhanya okubonakalayo.
Konke ukukhanya abakhuphayo ukuhamba ngaphesheya kwendawo kunye nendawo akulutho . Endaweni yaloo ndawo, ukukhanya okuvela kwi-quasar kuhlangene namafu egesi kunye nothuli. Njengoko ihamba, enye yokukhanya ixhamla ngamafu. Okushiya "iminwe" ecacileyo kakhulu ekukhanyeni esiyifumana apha eMhlabeni.
Iingcali ze-astronomers zingasebenzisa loo mpepha ukuba zixelele ukuba i-gesi ininzi kangakanani, indlela ehamba ngayo, kwaye ikuphi, ebenza ukuba baqikelele ukuba yiyiphi imeko efana nelo xesha kwimbali ye-cosmic.
Inokunika ingqiqo into eyenzekayo nakwiindawo ezikulo mnyama omnyama .Ukuqina kokukhanya (okunokuba kubonakala, i-ultraviolet, i-radiyo okanye imitha ye-gamma), ubatshela into ethile malunga neemeko ngqo kwiziko legalaxy yasekhaya. Ukukhutshwa kwe-quasar kwakhona kutshabalalisa izinto ezijikeleze umda omnyama, kwaye oko kunika ukukhanya kwakhona. Ngako-ke, kukho ulwazi oluninzi oluza kubhikishwa ekukhanyeni kwe-quasar. Ngaphezu koko, ukuba bahlala kwangoko kwindalo yendalo baxelela abanye ngeenkwenkwezi kwiimitha zelo xesha, kunye nolwazi oluninzi malunga nokubunjwa kunye nobukho bemigodi emnyama.
Kukho into eninzi malunga neli xesha xa izibane zendalo zibuyiselwa emva kwenzululwazi. Kodwa enemizekelo emininzi yamacasar ya mandulo iza kunceda abaphathi beenkwenkwezi bafunde oko kwenzekayo kuloo minyaka eyi-bhiliyoni yokuqala emva kweBig Bang.
Galaxies Amava oTshintsho
Iingqungquthela ezili-10 ezikufutshane emhlabeni
Indawo eQinisekile kwiNdalo
Indlela yokugqiba iMisa yeNkwenkwezi
Ziziphi iinkwenkwezi ezinobuqhetseba?
Isigama sisebenzisayo sisigama?
Iingcebiso kwiZicelo ezininzi zeDalphi Resolution
Ziziphi i-Musical Palindromes?
Qonda indlela uMsebenzi woLuntu woMhlaba osebenza ngayo
Ukunceda Ngokukhawuleza Kwimithwalo Yomlenze Wobunzima Namanqamane Amathole
Ukusebenzisa i-Calculus ukubala ixabiso lokunyuka kweeNkonzo
Iphulo likaMonald Trump likaMongameli ngo-2016
Funda ukuqokelela isenzi saseSpeyin 'Ukubamba'